sosegado : ခင်မိုးဝါ၊ မီမီအေးနှင့် ကျော်နိုင်စိုး၏သမီးလေး ခင်ရူပါစိုး
Posted by sosegado at 10/13/2011 11:59:00 AM
ခင်ရူပါစိုးလေးအား စာနာစိတ်ဖြင့် ဖတ်ရှုခဲ့ပါကြောင်း။
မမွေးခင်ထဲက သံသရာ ဒုက္ခတွေကို ခံနေရပါလား
ဟူးးဖတ်ရင်းနဲ့မောသွားပါတယ် အကိုရေ ..
တကယ်ပဲ အဲလိုမလုပ်သင့်တဲ့ အရမ်းကိုအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ ကြောက်စရာအပြုအမူတွေ ရှိနေကြသေးတယ် ..
အဲလိုဗေဒင်ရတြာတွေ အောက်လမ်းတွေဆိုတာ တော်တော်နဲ့တောင် ငရဲပြည်က မတက်ရမယ့်ကိန်းပဲ ..မြန်မာပြည်မှာ အဲဒါတွေရှိနေသေးတယ် ..ဆာဗားကျွန်းမှာဆိုလဲ စုန်းနတ်တွေနဲ့ပြုစားကြတယ် .ထိုင်းဆိုလဲအဲဒါတွေယုံကြည်ကြတယ် ..
၁။ ယောကျာင်္းလေးလဲမှားတယ် ဒါပေမယ့် သူလုပ်ရင်သူခံရမယ် ..၂။ ၆ လလောက်မှ ဖျက်ချတာတော့ ကိုယ်မှားတယ် မိခင်မဆန်တာ ။ရဲရဲရင့်ရင့်မွေးသွားပြီးဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတွေတစ်ပုံကြီး ရှိပါတယ် ...အဲလိုပဲ ၃။ စုန်းနတ်ကဝေတွေနဲ့ ပြုစားတဲ့လိုတဲ့စိတ် သို့ အဲလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင် အဲဒီမိန်းမရဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုဆိုတာကို ပေါ်လွင်သွားတယ် ၄။ ခင်မိုးဝါရှိတာကိုသိရဲ့နဲ့ ဆက်အပေါင်းခံတယ်ဆိုတာလဲ သူမဟုတ်သေးဘူး ..မယားရှိပြီးသားလူတစ်ယောက်ကို ဆက်ပေါင်းဖို့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု့ကခွင့်ပြူမတဲ့လား .ဒါတွေအားလုံးကပဲ တတိယဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ မီမီအေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်အသွားအလာတွေကို ဖော်ပြနေပါတယ် .
ကလေးရဲ့ကံဇာတာ အသက်ပြင်းမှု့ကိုဘယ်အရာကမှတားဆီးလို့မရခဲ့သလို ခင်မိုးဝါ ရဲ့ဘုန်းကံ ကလေးရဲ့ဘုန်းကံကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တယ်
တကယ့်အဖြစ်အပျက်သာဆိုရင်တော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ် ..ဖတ်လို့လဲအရမ်းကောင်းပါတယ်အကိုရေ ..
မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းက မဒိုးကန်ကိုယ်တိုင် နတ်လိုလိုစုန်းလိုလို လူတွေလုပ်တာ ခံခဲ့ရသေး.။ဘာမှမဖြစ်ပေါင် .ရတနာ ၃ ပါးကိုယုံကြည်တယ် ။သစ္စာဆိုတာကိုယုံကြည်တယ် ။
(စကားမစပ် ..အပေါ်က မှတ်ချက် မှာ ပေးသွားတဲ့လေဒီက ဒေါ်လုံးလိပ်စာလိုချင်လို့ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်ကိုကြည့်ရတာ ပခုံးတောင်နည်းနည်းတွန့်မိပါရဲ့း)
တခုခုကို ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ် ဆိုရင် မေတ္တာတရားကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရင် အမှားနည်းတယ် ဆိုတဲ့ အသိလေး ၀င်ပါတယ်။
ဇတ်အချိတ်အဆက်ကတော့ ကိုဆိုဆီရဲ့ လက်စွမ်းမို့ ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
ကိုဆိုဆီရေ....ရေးထားတာကတော့ ကိုဆိုဆီ့လက်ရာဆိုတဲ့အတိုင်း ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းလှပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖတ်ပြီးတော့ တရားသံဝေဂလည်း ရမိပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်တွေ အဲဒီလောက်အထိ အောက်မကျသင့်ဘူးလားလို့ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်လုံးလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို လုပ်စားနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတုန်းပဲလားမသိဘူးနော်။ ကံကံ၏အကျိုးက ကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ “ပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်းတဲ့”....ကျော်နိုင်စိုးလိုယောက်ျားမျိုးတွေ၊ မီမီအေးလိုမိန်းခလေးမျိုးတွေ လည်း လောကကြီးမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိနေသလဲ မသိဘူးနော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးများ ဖတ်လိုက်ရရင် တော်တော်အူတုန် အသည်းတုန်ဖြစ်သွားမှာ... ခုတောင် ဖတ်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ သမီးကိုပြေးကြည့်မိသေးတယ်။
ကိုဆိုစီတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ..။ တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖတ်ရင်း အဆုံးသတ်ကို သိချင်လာရတယ်။ ဖတ်ပြီး မောသွားရတယ်။ အပြစ်ကင်းတဲ့ သမီးလေးခင်ရူပါစိုးက ဘာလို့များ ဒီလို လူသားသုံးဦးနဲ့ လာပတ်သက်ရပါလိမ့်နော်။ ဒီလူသုံးယောက်လုံး မှားတယ်။ သမီးလေးကိုပဲ သနားမိတယ်။
သံသရာစက်ဝန်းဆိုတာ ဒါပဲ။ မကောင်းမှုမှန်သမျှ မပြုလုပ်တာ အကောင်းဆုံး။ ဒီလို မျှဝေပေးတာကောင်းပါတယ်။
အင်း မဖြစ်နိုင်တာတွေ လို့ မပြောချင်တော့ပါဘူး ကိုယ်နားမလည် တဲ့ အရာတွေ အများသားကိုး
သမီးလေးခင်ရူပါစိုးရဲ့ အတိတ်ကံပေါ့လေ။ လူဖြစ်ထိုက်မဲ့ကံပါလာတော့လည်း ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေရှိနေအုံးတော့ သတိပြန်လည်လာတာပေါ့။ ကျွဲနှစ်ကောင်ခတ်တဲ့နေရာမှာ မြေစာပင်သနားစရာနော်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ပဲ...
တကယ်တော့ လူကြီးတွေ ကြားထဲမှာ ကလေးက ဓားစာခံ ဖြစ်ရတယ်။ ဒီလို ကလေးတွေ ဘယ်လောက်တောင် များနေပြီလဲ...
ခင်ရူပါစိုးလေး အတွက် တကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်...
ကိုဆိုစီရေ...အတ္တကြီးကြတဲ့ လူသားတွေကြောင့်ပဲ အပြစ်မဲ့တဲ့ လူသားတွေဟာ အကျိုးဆက်တွေ ခံစားကြရတယ်...ဒီလိုခံစားရတာလဲ အတိတ်ကံ လိ်ု့ပဲဆိုရတော့မယ်ပေါ့...ပတ်လည်ရိုက်ကြီးပါပဲဗျာ လောကကြီးမှာက :)
ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးကတော့ ပြောတတ်ပါဘူးဗျာ
အင်း ဖြစ်ရလေ။ အဖေရဲ့ မိုက်မဲမှုကြောင့် အားလုံးခါးစည်းခံကြရတာပါကလား။
အစအဆုံး စိတ်မောစွာ ဖတ်ပြီး ၀တ္ထုဇာတ်လမ်း တပုဒ်ပါလို့ ရေးထားတာမို့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားပါတယ်။ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ မရှိစေချင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့လဲ တခါတခါ တကယ့်လက်တွေ့ အဖြစ်အပျက်တွေက ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းထက် ဆန်းကျယ်တော့လဲ ခက်သားလား ...
၀ဋ်ကြွေးတွေ က တော်၂ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်. . နော် .
ကံ ကံရဲ့ အကျိုးက အရေးကြီးပါလား၊ သံသရာ ဝဋ်ကြွေးတွေကို ကြောက်နေမိပြီ
ဖတ်ပြီးတော့ဆို တကယ့်အဖြစ်အပျက်များလားလို့ ထင်လိုက်မိတာ
ဒီလိုအဖြစ်တွေ လောကကြီးမှာ တကယ်လဲဖြစ်တတ်တာကိုး
ကျော်စိုးနိုင်လို့ ယောက်ျားတွေလည်း လောကကြီးမှာ အများသာ မဟုတ်လားနော်။
မီမီအေးလို အငြိုးကြီးသူတွေလည်း ရှိတတ်ကြတာပါဘဲ။
သို့သော်လည်း သမီးလေး အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အချိန်မီ အသိတရားရသွားတဲ့ မီမီအေးကိုချီးကျုးပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာ။ အသက်တစ်ချောင်း အခြေတည်လာပြီ ဆိုမှတော့ ရအောင် တည်မြဲ ယူလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ အခုလိုမျိုးတွေ နဲ့ ဆိုတော့ သံသရာက ရှည်တယ် မဟုတ်လား။ မေတ္တာတရားကတော့ အကောင်းဆုံးသော အကျိုးတရားပါပဲ။ သမီးလေးကတော့ ကြားက သနားစရာပါ။
( ဟိုနေ့ကတည်းက တပိုင်းဖတ်ပြီးတော့ အခုမှ ဆုံးအောင် လာဖတ်ရတယ်ဗျာ။ မအားဖြစ်နေလို့ )
ရင်တမောမောဖတ်ရတာ...ခင်ရူပါစိုးလေး...ဘေးကင်းရန်ကွာ ဖြစ်သွားရလို့ ကျေနပ်မိပါရဲ့..ဝထ္ထုကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါအကို...
ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်တွေနေရာမှာတော့ နားမလည်တာတွေကို ကျော်ဖတ်လိုက်ရပေမယ့် ဇာတ်လမ်းရဲ့ သဘောကို ကောင်းကောင်းဖမ်းမိလို့ တော်သေးပါရဲ့။
လူ့လောကမှာတော့ ဒါမျိုးအဖြစ်မျိုးတွေ ခပ်ဆင်ဆင် အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ ခံစားလိုက်ရသူဘက်ကလည်း အငြိုးတကြီး ဖြစ်လောက်တယ်။
အင်း အားလုံး ဝဋ်ကြွေတွေပါပဲ။
အောက်လမ်းနဲ့လုပ်တဲ့သူနေရာမှာ ကိုယ်ဆိုရင်ရောလို့တွေးပြီ စာနာမိပါတယ်။
အမှန်က ယောင်္ကျားလေး မကောင်းတာပဲ၊ နောက်အမျိုးသမီးကလည်း ဟိုမှာ ကလေးမရှိမှတော့ အဲလို မလုပ်သင့်တော့ဘူး။
အားလုံး မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ကြတဲ့ အကျိုးဆက်ပါပဲ။
ကျန်းမာပါစေ တည်ငြိမ်အေး ရေ